गृहकार्य थिएन, पदक आएन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
गृहकार्य थिएन, पदक आएन
भाद्र २३, २०७५ ध्रुव तुलाधर
काठमाडौँ — हामीले आफ्नो ठाउँबाट त राम्रो गर्‍यौं । तर, अरू देशका खेलाडीले पनि त्यत्तिकै राम्रो गरेका हुन्छन् । त्यसमा अब्बल भएर पदक जित्नका लागि धेरै पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ । प्राविधिक पक्षमा हामी धेरै पछाडि परिसक्यौं । प्रशिक्षकहरू कति त आउटडेटेड छन् । परिवर्तित प्रविधिसँग जानकार छैनन् । त्यसले गर्दा हाम्रो स्तर जहाँको त्यहीं छ । अब यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पौडीका खेलाडी शिरीष गुरुङले जम्पिङ स्टयान्डमा अल्मलिँदा आफ्नो प्रदर्शनमा पनि सुधार ल्याउन नसकेको सुनाए । कराँतेका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ भन्दै थिए, ‘यहाँ खेलेको म्याट नै फरक रहेछ । त्यसले गर्दा खेलाडीको पर्फमेन्समा प्रभाव पर्‍यो ।’ भर्खरै एसियाली देशहरूको कुम्भ खेलमेला १८ औं एसियाली खेलकुद सकिएको छ । इन्डोनेसियाको जकार्ता र पालेम्बाङमा आयोजित एसियाडका क्रममा शिरीष र दीपकको भनाइसँग सहमत हुने हो भने नेपाली खेलकुद अत्याधुनिक खेल प्रविधिभन्दा धेरै टाढा छ ।
थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव बटुलिसकेका शिरीषजस्ता खेलाडीलाई जम्पिङ स्टयान्डले प्रभाव पार्छ भने नयाँ खेलाडी त धेरै कुरामा पछाडि हुन्छन् । एसियाली खेलकुदमा धेरै सफलता पाएको मार्सल आर्टसका खेल तेक्वान्दो, कराँतेसहित बक्सिङको हालत पनि त्यही छ । जतिखेर तेक्वान्दो, कराँते, बक्सिङ नयाँ खेलका रूपमा एसियाडमा प्रवेश भयो । त्यति बेला नेपालले पनि धेरथोर सफलता पाएको थियो । किनकि नेपाली खेलाडी पनि त्यही प्रविधिसँग अभ्यस्त थिए । अहिले विज्ञान प्रविधिको फड्कोसँगै खेलकुदमा पनि त्यसको प्रभाव बढ्दो छ । अत्याधुनिक प्रविधिहरू भित्रिएका छन् । प्रविधिसँगै खेल्ने तौरतरिका र नीति नियमहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । सुविधासम्पन्न पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । भन्नुपर्दा स्मार्ट टेक्नोलोजीमा आधारित खेलकुद छ । त्यसलाई नेपालले पछयाउन सकेको छ त ? तेक्वान्दोकी संगीना वैद्यको भनाइ सुन्ने हो भने, छैन । ‘पुरानै पद्धतिसँग जुधिरहेका छौं । अरू देश निकै अगाडि बढिसके । हामी जहाँको त्यहीं छौं । प्रतिस्पर्धा भने उनीहरूसँग गर्नुपर्छ ।’ नयाँ म्याटको आफ्ना खेलाडीले भेउ पाउन नसक्दा पनि प्रदर्शनमा प्रभाव परेको कराँते प्रशिक्षक श्रेष्ठले सुनाएका थिए ।
नेपालले २० वर्षपछि एसियाडको रजत सफलतामा खुसी भेटाएको छ । त्यो पनि नयाँ खेलबाट हो । एसियाडमा पहिलोपल्ट समावेश पाराग्लाइडिङबाट नेपालले रजत पदक जितेको छ । एसियाली खेलकुद इतिहासमा नेपालले जितेको यो दोस्रो रजत पदक हो । यसअघि सन् १९९८ को बैंकक एसियाडमा तेक्वान्दोकी सविता राजभण्डारीले जितेकी थिइन् ।
सधैं व्यावसायिक उडान गरिरहेका पाराका अनुभवी पाइलटहरू भएकाले नेपालले त्यो सफलता चुमेको हो । एसियाडलाई नै भनेर छोटो तयारी भए पनि उनीहरूले आफ्नो पदक जित्ने मिसन पूरा गरेका छन् । स्वर्णकै दाबेदार थिए । नजिकै पुगे । थोरैले त्यसमा असफल भए । जकार्तास्थित वेस्ट जाभाको बदलिरहने मौसमको चुनौतीले पाँचै दिन सबैले टास्क पूरा गर्न पाएनन् । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई स्वर्णबाट वञ्चित गरायो । मेन्स टिम क्रसकन्ट्री विधामा रजत सफलता पाउँदाका हकदार विजय गौतम, विशाल थापा, युकेश गुरुङ, सुशील गुरुङ र विमल अधिकारी थिए ।
नेपालले एसियाली खेलकुदमा पहिलो संस्करण (सन् १९५१, दिल्ली) देखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ । १८ संस्करण आइपुग्दा नेपाल दुईपल्ट मात्र सहभागी छैन । यसपालि इन्डोनेसियामा नेपालले २९ खेलमा भाग लिँदा १ सय ८७ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । फुटबल, भलिबल, कबड्डी टिम खेलका रूपमा रहे पनि अन्य खेलका खेलाडी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा थिए । राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको भलिबलसँगै कबड्डी लामो समयपछि एसियाड खेल्न पुगेको हो । दुवैको उद्देश्य एसियाडमा उच्च प्रदर्शन गर्दै वरीयता सुधार्नु थियो । त्यसमा केही सफलता पाए । अरू केही खेलका खेलाडीले राष्ट्रिय कीर्तिमान र व्यक्तिगत प्रदर्शनमा सुधार गर्नुबाहेक धेरैको सहभागिता नतिजाका हिसाबले उपलब्धिविहीन रहे । अपेक्षा गरिएका खेलबाट समेत एउटै पदक आएन । किन जितिएन पदक ?
धेरै खेलका प्रशिक्षक तथा खेलाडीको मुखबाट निस्केको भनाइ हो, ‘तयारी नै पुगेन । अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाएनौं ।’ हो, कति खेलका खेलाडीले वर्षमा एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता त खेल्न पाउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर त धेरै टाढाको विषय हो । सिधै छनोट भएर एसियाडजस्ता ठूला प्रतियोगिता खेल्न जान्छन् । विश्वका एकसेएक स्टार खेलाडी जमघट हुने प्रतियोगितामा बिनातयारीको प्रतिस्पर्धा शून्यताबाहेक अरू हुन सक्दैन । त्यो इन्डोनेसिया एसियाडमा पनि देखियो । कति खेलाडीको प्रदर्शन बिर्सनलायक रहयो । सहभागिता जनाउनमै सीमित भयो । विगतका संस्करणहरूजस्तै भए । पछिल्लो दुई संस्करणमा पनि नेपाली टिम १–१ कांस्यमै स्वदेश फर्कनुपरेको थियो ।
एसियाडलाई तयारी नै थिएन भन्नचाहिँ मिल्दैन । ५–७ महिनादेखि विभिन्न खेलको राष्ट्रिय टिम बनाएर खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा राखिएको थियो । पदक सम्भावित खेलहरूलाई अन्तिम समयमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा पनि पठाइएको हो । नेपाली टोलीका सेभ द मिसन केशवकुमार विष्ट विगतमा भन्दा यसपल्ट झन् राम्रो तयारी गरेको मान्छन् । ‘विगतमा भन्दा यसपल्ट तयारी राम्रो थियो । पदक सम्भावित खेलका खेलाडीलाई सम्बन्धित संघको योजनाअनुसार विभिन्न देशमा वैदेशिक प्रशिक्षण पठाएका थियौं । राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म गरेका छौं । तयारी नभएको होइन, एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्न यो तयारीले नपुग्ने रहेछ ।’
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवसमेत रहेका विष्टका अनुसार पदक जित्न नसके पनि आफ्नो स्तरमा नेपाली खेलाडीको ‘पर्फमेन्स’ राम्रो थियो । ‘’
नेपालले भित्र्याउन सक्दैन न त प्रविधि ? ‘खोइ, बजेट । राज्यले खेलकुदलाई हेर्ने आँखा नै सानो छ । अत्यावश्यक बजेट पनि समयमा उपलब्ध हुँदैन । कर्मचारीलाई तलबभत्ता र संघहरूलाई वर्ष एउटा प्रतियोगिता गर्न दिन पनि बजेट पुग्दैन । प्रविधि भित्र्याउनका लागि त ठूलै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यको प्राथमिकतामा खेलकुद पर्नुपर्छ ।’ हो, सदस्यसचिवको यो भनाइसँग सहमत हुन सकिन्छ । खेलकुदलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । कामचलाउ पारामा चलिरहेछ खेलकुद । राष्ट्रको ऐनाका रूपमा रहेको नेपालमा खेलकुदको मन्त्री हुन कोही तँछाडमछाड गरेको सुनिँदैन । किन भन्दा यो राज्यको सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालयमा पर्छ ।
यस एसियाडका लागि तयारी र सहभागितालाई भनेर सरकारसँग ८ करोड रुपैयाँ माग हुँदा ५ करोड मात्र निकासा दिएको छ । हाललाई अन्यत्रबाट शोधभर्ना गरेर उधारोमा एसियाड सहभागिता जनाएको सदस्यसचिव सुनाउँछन् ।
बजेट नहँुदा–नहुँदै किन यति धेरै सहभागिता त ? नेपाल १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजनाको संघारमा छ । त्यसमै समावेश हुने खेलको तयारीस्वरूप संख्यात्मक हिसाबमा धेरै खेल समावेश गरिएको हो । खेलकुदको सकारात्मक सन्देश दिन पनि कति खेललाई स्थान दिनुपरेको दलिल पनि सेभ द मिसन विष्टसँग छ । भन्छन्, ‘खेल भनेर लागेका छन् । दिन–रात मिहिनेत गरेका छन् । परिवारको लगानी छ । तर उनीहरूले एउटै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको मुख देख्न पाएका छैनन् । कम्तीमा खेलाडी बनेर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियाड खेलेछ भन्ने त होस् । परिवार पनि पोजिटिभ हुन्छ । समाजमा पनि एउटा नाम रहन्छ । नभए परिवार पनि आफ्नो सन्तानलाई बरु खाडीमा काम गर्न पठाउलान् तर खेलाडी बन्नतिर पठाउन चाहँदैनन् । खेलाडी उत्पादन जिरोमा झर्छ ।’
नेपाललाई मौलाउँदो खेलसंख्याले पनि पिरोलेको छ । नेपालजस्तो मुलुकले त्यो धान्न सक्ने स्थितिमा छैन । एसियाड, ओलम्पिकजस्ता ठूला प्रतियोगितामा आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा आयोजकले केही खेलहरू राख्न पाउने नियम हुन्छ । अनि चलाख नेपाली खेलकर्मी त्यसकै आधारमा संघ दर्ता गर्छन् । प्रतियोगिता नजिकिँदै जाँदा बिनातयारी लबिङकै भरमा सहभागी हुन पुग्छन् । यसपालि एसियाडमा १० नयाँ खेलले प्रवेश पाउँदा चार खेलमा नेपाल सहभागी भयो । पाराग्लाइडिङबाहेक अरूको सहभागितामै सीमित भयो । यसरी नै नयाँ नयाँ खेल जन्मिँदै गएका छन् । त्यसको अनावश्यक भार राज्यमा थपिँदै गएको छ ।
कुन खेललाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । पदक जित्ने खेल कुन हो । कुन खेलमा धेरैभन्दा धेरै सफलता हात पार्न सकिन्छ । कुनलाई दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो । त्यो पहिचान नगरी होलसेलमा नेपालले ठूला प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । यसलाई निराकरण नगरी जाने हो भने नेपालले एसियाड स्वर्णका लागि धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘इनर्जी अफ एसिया’ । इन्डोनेसियाको खेलसंस्कृति लोभलाग्दो थियो । जेलोरा बुङकार्नो त्यही स्टेडियम हो जहाँ सन् १९६२ को एसियाड आयोजना भएको थियो । ५६ वर्षअघि चौथो संस्करण गर्दा जकार्ता सहरले १३ राष्ट्रका १४ सय ६० खेलाडीलाई आतिथ्यता दिएको थियो । अहिले त्यसैलाई विशाल रूप दिएर स्पोर्टस कम्प्लेक्सका रूपमा अत्याधुनिक पारिएको छ । स्टेडियममा मात्र ८० हजार दर्शक अट्छ । त्यसबाहेक थुपै मल्टिप्रपोज कभर्डहलसहित कन्भेन्सन सेन्टर बनाइएको छ । हरियाली त्यत्तिकै छ । खुला ठाउँ त्यत्तिकै राखिएको छ । हिँड्ने हो भने दिनभरमा पनि कम्प्लेक्स घुमेर सकिँदैन । हरेक खेलस्थलअगाडि फयान फेस्ट जोन बनाइएको छ । जहाँ घुम्ने, खाने रमाइलो गर्नेको भीड उत्तिकै छ ।
यस एसियाडमा साढे ११ हजार खेलाडी प्रतिस्पर्धामा थिए । आयोजक इन्डोनेसियाको सबैभन्दा ठूलो टोली ९ सय ३१ खेलाडीको थियो । उसले एसियाड इतिहासमै उच्च सफलतास्वरूप पदकतालिकामा चौथो स्थान भेटयो । एसियाको उदाउँदो खेलशक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्‍यो । त्योसँगै अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न पूर्वाधारमा एसियाड सफल पारेको इन्डोनेसियाले ओलम्पिक आयोजनातर्फ नजर बढाएको छ । उसले सन् २०३२ को ओलम्पिक दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसपछि शीर्ष तीन स्थानमा कब्जा जमाएका एसियाका शक्तिशालीत्रय चीनले ८ सय ३८, जापानले ७ सय ६१ र दक्षिण कोरियाले ७ सय ७३ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उतारेका थिए । सबैभन्दा कम खेलाडी बु्रनाई र भुटानले सहभागी गराए । बु्रनाईका १५ खेलाडीले सात खेलमा भाग लिँदा भुटानका २४ खेलाडीले तेक्वान्दो, बक्सिङ, आर्चरी र गल्फमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । भुटानका खेलाडीको प्रदर्शन हेर्दा लाग्दा आफ्नो प्रभाव रहने खेलमा उसले दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ ।
सहभागितामै हेर्ने हो भने नेपालभन्दा धेरै कम खेलाडी सहभागी गराउने देशले पनि उच्च सफलता भेटेका छन् । उत्तर कोरिया, बहराइनजस्ता राष्ट्रले नेपालभन्दा कम खेलाडी सहभागी गराएर पदक तालिकाको टपटेन स्थानभित्र आफूलाई पुर्‍याएका छन् । उत्तर कोरियाले १ सय ६७ र बहराइनले १ सय ५ खेलाडी मात्र उतारेका थिए । दुवै देशले १२–१२ त
स्वर्ण नै जितेका थिए । एउटै खेलबाट पनि आफ्नो पहिचान दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बहराइनले पेस गरेको छ । उसले जितेको कुल २६ पदकमा २५ त एथलेटिक्सकै थियो । एथलेटिक्समा उसका ३५ खेलाडी प्रतिस्पर्धी थिए । दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंका १७२, बंगलादेश ११७ र माल्दिभ्स १०६ खेलाडीसहित जकार्ता पुगेका थिए । उनीहरू पनि पदकविहीन भए । दक्षिण एसियाली महारथी भारतले भने ६ सय १३ खेलाडी उतार्दा १३ स्वर्णसहित ६५ पदक, पाकिस्तानले २२४ खेलाडीबाट ४ कांस्य र हालै दक्षिण एसियाबाट अलग बनेको अफगानिस्तानले ६८ खेलाडीबाट २ कांस्य पदक जितेका थिए ।
एसियाका ४५ राष्ट्र र युनिफाइड कोरिया (उत्तर र दक्षिणको संयुक्त टोली) सहित ४६ टोलीको प्रतिनिधित्व हुँदा ३७ राष्ट्र कुनै न कुनै पदक जित्न सफल भए ।
नेपालको एसियाड असफलताका पछाडि थुप्रै कारण छन् । मुख्यत: नेपालले एसियाडका लागि भनेर कुनै दीर्घकालीन योजना बनाएको पाइँदैन । यो हरेक चार वर्षपछि खेल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । तर गृहकार्य हँुदैन । खेलाडीदेखि प्रशिक्षक तयार पार्ने काम हुँदैन । त्यसका लागि वार्षिक कुनै बजेट छुट्टिदैन । अन्तिमतिर बढीमा ५–७ महिनाको तयारीभरमा भाग लिन्छौं । अनि पदकको ठूलो आस राख्छौं । हातलाग्दा शून्य हुन्छ । अझै भन्ने हो भने महिनाअघिसम्म खेल सहभागिताकै टुंगो लाग्दैन त्यो पनि बजेटका कारण । यसपल्ट नै स्क्वासको सहभागिता १५ दिनअघि लागेको थियो । खेलाडी थपघटको काम त अन्तिमसम्म चल्छ । महिना दिनअघिसम्म सरकारले बजेट दियो भने धेरै खेलाडी सहभागी गराउँछौं नभए त्यहीअनुसार गर्छौ भनेर खेलकुदका पदाधिकारी स्वयं भनिरहेका हुन्छन् ।
उता, खेलाडीले नियमित प्रशिक्षण गर्ने देशको एउटै ठूलो दशरथ रंगशालाको हालत उस्तै दयनीय छ । पुनर्निर्माण थालिएको वर्षौं भइसक्यो, पूरा भएको छैन । दैनिक प्रशिक्षणका लागि समेत खेलाडी भौतारिनुपर्ने अवस्था रहयो । खेलस्थल पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भए पनि खेलाडीले त्यसकै लागि संघर्ष गर्नुपर्‍यो । १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा सर्वाधिक पदक जित्न सफल र एसियाडमा समेत पदकको उच्च आशा गरिएको उसुका खेलाडी त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप सेमिकभर्डहलमा थोत्रो म्याटमा प्रशिक्षणरत रहनुपर्‍यो । त्यो पनि क्लोज क्याम्प राखिएपछि । यो त एउटा खेलको उदाहरण मात्र हो । थुप्रै खेलले भोग्नुपरेको समस्या यही हो । यसपल्ट धेरै खेल फरक ठाउँको बन्द प्रशिक्षणमा रहे ।
खेलस्थल नै पाउन गाह्रो अवस्थामा प्रविधिसँग साक्षात्कार प्रशिक्षक पाउनु आकाशको फल आँखा तरी मर् भनेजस्तै थियो । प्रविधि र परिवर्तित नियमसँग अपडेट नभएका प्रशिक्षकको सिकाइबाट सफलता नपाएको कुरा सदस्यसचिवले नै स्विकारिसकेका छन् । मार्सल आर्टसका कति खेलमा त त्यसमै माथ खाएको उनको भनाइ थियो ।
त्यसो त, बिस्तारै नेपाली खेलकुदको आकर्षण घट्दोमा छ । राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हँुदैनन् । त्यसले गर्दा नयाँ खेलाडी उत्पादन दर कम छ । थोरै खेलाडीबाट राष्ट्रिय टिम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा खेलाडीलाई पनि आफू छनोट हुन्न भन्ने कुनै डर हँुदैन । जसले गर्दा उसले जति मिहिनेत गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन् । जिम्मेवारीबोध छैन, खेलाडीमा अनुशासनको कमी छ ।
लन्डनमा दैनिक ४–५ घण्टा प्रशिक्षकको निगरानीमा रहेर प्रशिक्षण गर्ने किशोरी पौडीबाज गौरिका सिंहकै प्रदर्शनले त एसियाडमा अहिले नतिजा दिन गाह्रो भयो । उमेरका कारण गौरिकाबाट एसियालीस्तरमा नतिजा आउन अझै समय लाग्ने चिकित्सकले बताउँदै आएको परिवारले जनाएको छ । यहाँ सामान्य प्रशिक्षण गर्ने खेलाडीबाट नतिजा अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।
अर्को त कुन स्तरको प्रतिस्पर्धामा जाँदै छौं । त्यसका लागि कस्ता खेलाडी छान्ने भन्नेमा पनि नेपाली खेलकुद चुक्ने गरेको उदाहरण जकार्ताको भूमिमा पनि देखियो । नेपाली खेलाडीले सुरुमै उचाइबाट माथ खान्थे । खेल्नु छ फाइट । ६, साढे ६ फिटका प्रतिद्वन्द्वीसामु उनीहरूले विपक्षीलाई हानेको किक र पञ्च न त सही ठाउँमा लाग्थ्यो, न त पावर नै पुग्थ्यो । मार्सल आर्टसका धेरै खेलाडी यसरी नै चुके । आफूभन्दा कमजोर प्रतिद्वन्द्वीविरुद्धको फाइट जितिहाले पनि अर्को फाइटमा त्यस्तै दयनीय अवस्था सामना गर्नुपथ्र्यो । दक्षिण एसिया र एसियाली स्तरमा फरक ढंगले खेलाडी छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
टुंगिँदै छ एसियाडको रौनक
भाद्र १७, २०७५ ध्रुव तुलाधर
जकार्ता — मुख्य रंगशाला जेलोरा बुङ कार्नो (जेबीके) मा आइतबार साँझ हुने भव्य समारोहसँगै १८ औं एसियाली खेलकुदले बिट मार्दै छ ।
१८ औं एसियाली खेलकुदमा शनिबार ट्रायथलनमा व्यक्तिगततर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालका दीपेश चौधरी  । तस्बिर सौजन्य : आयुष जोशी
‘इनर्जी अफ एसिया’ सन्देश साथ दुई साता बढी चलेको एसियाको कुम्भ खेल मेलामा साढे ११ हजार खेलाडीले आफ्नो प्रतिभा देखाए ।
उनीहरूले ४५ देशको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जहाँ उत्तर र दक्षिण कोरियाका केही खेलाडी संयुक्त टिममा रहेर खेलेर पदक जिते । उद्घाटनमा जसरी इन्डोनेसियाले समापन समारोहमा पनि आफ्नो कला र संस्कृतिलाई विशेष महत्त्वसाथ प्रस्तुति दिनेछ । समापनमा पनि राष्ट्रपति जोको विदोदोको उपस्थिति रहने बताइएको छ । इन्डोनेसियाले दोस्रोपल्ट एसियाड सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । पहिलोपल्ट सन् १९६२ मा चौथो संस्करण आयोजना गरेको थियो ।
यसपालि राजधानी सहर जकार्ता र पुरानो सहर पालेम्बाङमा विभिन्न ४५ खेलका प्रतिस्पर्धा भए । दक्षिणी सुमात्रा राज्यको राजधानी पालेम्बाङमा १० खेल आयोजना भयो । समापनमा आयोजकले १९ औं संस्करण आयोजक हाङझाउ सहरलाई आयोजनाको झन्डा हस्तान्तरण गर्नेछ । सन् २०२२ को एसियाड चीनको हाङझाउ सहरले आयोजना गर्नेछ ।
आयोजक इन्डोनेसियाले आयोजनासँगै एसियामा आफ्नो खेलशक्तिलाई पनि प्रस्तुत गरेको छ । चौथो संस्करण आयोजना गरिएको सेनायनस्थित जेबीके रंगशालालाई पुनर्निर्माण गरेर यसपल्टका लागि भव्य बनाइएको थियो । जहाँ मुख्य रंगशालाबाहेक आर्चरी फिल्ड, हक्की, बास्केटबलसहित तीन एबीसी ट्रेनिङ मैदानहरू समावेश गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न १२ स्थानमा खेलहरू भएका थिए ।
मुस्लिम जनसंख्या भएको विश्वकै ठूलो देशमा पर्ने इन्डोनेसियाले विश्व खेलकुदमा एसियाडमार्फत गतिलो सन्देश दिएको छ । सन् १९४९ मा डचभूमिबाट स्वतन्त्र इन्डोनेसियाले आफ्नो आर्थिक विकास पनि प्रदर्शन गर्‍यो ।
यसपल्ट ३७ देशका खेलाडीले आफ्नो प्रदर्शनबाट एसियाडको कुनै न कुनै पदक गलामा झुन्डयाएका छन् । त्यसमा स्वर्ण जित्नेमा २२ देशका खेलाडीमात्र छन् । एसियाको शक्ति राष्ट्र चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाएको छ । उसका खेलाडीले १ सय ३१ स्वर्णसहित २ सय ८७ पदक जितेका छन् । चीनको पछिल्लो इन्चोन एसियाडमा भन्दा कम पदक हो ।
जकार्ता एसियाडमा चीनले पौडीमा धेरै स्वर्ण जित्यो । चिनियाँ पौडीवाजले १९ स्वर्णसहित ५० पदक हत्याए । एथलेटिक्समा १२ स्वर्णसहित ३३ पदक जितेको चीनले क्यानोइङ/कायक तथा उसुबाट १०–१० स्वर्ण जितेको थियो । रोविङ, आर्टिक्टिक जिम्न्यास्टिक, सुटिङ, डाइभिङमा पनि चिनियाँ खेलाडीले आफ्नो प्रभाव जमाए ।
एसियाडको शक्तिशाली जापानले पछिल्लो दुई संस्करणको नतिजा हेर्ने हो भने यसपालि निकै राम्रो प्रगति गरेको छ । आफ्नो पुरानो छवि फर्काउने प्रयासमा रहेको जापानले आफूलाई दोस्रो स्थानमा उभ्याएको छ । जबकि जापान पछिल्ला संस्करणहरूमा दक्षिण कोरियाभन्दा पछाडि पार्दै आएको थियो ।
यस एसियाडमा जापानले ७३ स्वर्णसहित २ सय १ पदक जितिसकेको छ । दक्षिण कोरिया तेस्रोमा झर्दा उसको खातामा ४८ स्वर्णसहित १ सय ७३ पदक छ । कोरियाले सबैभन्दा बढी पदक फेन्सिङबाट जितेको थियो । फेन्सिङमा ६ स्वर्णसहित १५ पदक जितेको हो । त्यसपछि तेक्वान्दोमा ५ स्वर्णसहित १२ पदक जित्यो ।
आयोजक इन्डोनेसियाको इतिहासकै राम्रो नतिजा आएको छ । उसले ३१ स्वर्णसहित ९८ पदक जितिसकेको छ । उसका खेलाडीले लक्ष्यभन्दा बढी सफलता दिलाएका छन् । एसियाको शीर्ष १० भित्र रहँदै २०–२० स्वर्ण जित्ने आयोजकको अपेक्षा थियो । चौथो संस्करण आयोजना गर्दा पाएको सफलतापछि एसियाडमा इन्डोनेसियाको यो नै ठूलो उपलब्धि हो । इन्डोनेसियाले सबैभन्दा बढी स्वर्ण पेनकेक सिलातबाट जितेको छ । यो देशको परम्परागत खेल मार्सल आर्टस हो । पहिलोपल्ट एसियाडमा समावेश पेनकेकबाट इन्डोनेसियाले १४ स्वर्ण जितेको थियो ।
उज्वेकिस्तान, चाइनिज ताइपेई, बहराइनले जकार्ता एसियाडमा आफूलाई निकै माथि पुर्‍याएका छन् । उज्वेकले पहिलोपल्ट २१ स्वर्णसहित ७० पदक जितेको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको टोली एसियाड पदक तालिकामा पहिलोपल्ट शीर्ष १० भित्र परेको हो । उज्वेकले सबैभन्दा धेरै कुराँसबाट ६ र बक्सिङबाट ५ स्वर्ण भित्र्याएको छ । पहिलोपल्ट समावेश गरिएको कुराँस उज्वेकिस्तानको परम्परागत मार्सल आर्टस हो । यो कुस्तीको विकसित गरिएको खेल हो ।
चाइनिज ताइपेईले आफूलाई टपटेनमा बलियो बनाएको छ । उसले १७ स्वर्णसहित ६७ पदक जितेको छ । उसले ग्वाङझाउमा १३ र इन्चोनमा १० स्वर्णमात्र जितेको थियो । बहराइन पनि १२ स्वर्णसहित २६ पदक जितेर शीर्ष दस नजिक रह्यो । एसियाड इतिहासमा उसको राम्रो प्रदर्शन हो । बहराइनले सबै स्वर्ण एथलेटिक्सबाट जितेको थियो । एथलेटिक्समा एकछत्र हुने क्रममा बहराइनले कुल २५ पदक जितेको हो । अर्को उसले जितेको एउटा पदक ह्यान्डबलको थियो ।
शीर्ष दसमा रहेको उत्तर कोरियाले भारोत्तोलनमा बाजी मार्‍यो । भारोत्तोलनको ८ स्वर्ण जितेपछि उत्तर कोरिया पदक तालिकामा माथि रहयो । त्यसमा कुस्ती, जिम्न्यास्टिक र सुटिङको स्वर्ण थपिएको थियो । ग्वाङझाउ र इन्चोनमा शीर्ष ५ मै रहेको काजकिस्तान नवौं स्थानमा पुगेको छ । १५ स्वर्णसहित ७५ पदक जितेको कजाक भारतभन्दा पछाडि छ ।
भारतले १५ स्वर्णसहित ६९ पदक जितेको छ । भारतका लागि सफल खेल एथलेटिक्स बन्यो । यसैबाट उसका खेलाडीले ७ स्वर्णसहित १९ पदक जिते । त्यसमा सुटिङ, कुस्तीले २–२ स्वर्ण थप्दा ब्रिज, रोविङ, टेनिस र बक्सिङका खेलाडीले पनि १–१ स्वर्ण जितेका थिए ।
पदक संख्याका हिसाबमा पछिल्लो दुई एसियाडभन्दा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि थाइल्यान्डले स्वर्णपदक भने पुरानको हाराहारीमा जितेको छ । उसले ११ स्वर्णसहित ७३ पदक जितेको छ । २०२२ को विश्वकप आयोजक कतारले ६ स्वर्णसहित १३ पदक जित्दा एथलेटिक्सबाट सर्वाधिक धेरै ४ स्वर्ण जितेको हो ।
नेपाल पदक तालिकाको ३३ औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानले चार कांस्यपदक जितेको छ । पाकिस्तान ३४ औं स्थानमा छ । अन्य दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्द्वी श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र भुटानले पदक जित्न सकेनन् । पाकिस्तानले एथलेटिक्स, कराँते, कबड्डी र स्क्वासबाट पदक जितेको हो ।
नेपाल एक्लो रजतपदक जितेर उक्त स्थानमा रहेको छ । यो नेपालले २० वर्षपछि एसियाडमा जितेको पहिलो रजत पनि हो । यसअघि बैंकक एसियाडमा तेक्वान्दोकी सविता राजभण्डारीले रजत जितेकी थिइन् । त्यो एसियाड इतिहासको ठूलो पदक थियो । यसपालि पाराग्लाइडिङले उक्त सफलता पाएको हो ।
पहिलोपल्ट एसियाडमा डेब्यु गेम पाराग्लाइडिङको पुरुष टिम क्रसकन्ट्रीमा नेपालले रजत जितेको थियो । २९ खेलमा नेपालले सहभागिता जनाउँदा अन्य खेल पदकविहीनको स्थितिमा रहे । त्यसमा नेपालका १ सय ८७ खेलाडी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । ग्लाइडरहरू विजय गौतम, विशाल थापा, युकेश गुरुङ, सुशील गुरुङ र विमल अधिकारीको गलामा मात्र रजत झुन्डिए ।
पछिल्लो दुई एसियाडमा नेपालले १–१ कांस्य पदकमात्रै जितेको थियो । ग्वाङझाउमा बक्सिङका दीपक महर्जन र इन्चोनमा कराँतेकी विमला तामाङले कांस्य जितेका थिए । एसियाली खेलकुदमा सबैभन्दा सफल खेल भनिएको तेक्वान्दो लगातार तेस्रोपल्ट पदकविहीन भएर घर फर्कनुपरेको छ । विगतमा भन्दा धेरै पदक जित्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसलाई पूरा नेपाली खेलाडी जकार्तामा असफल भएका छन् ।
जकार्ता एसियाडमा व्यक्तिगततर्फ धेरै पदक जापानकी पौडीवाज रिकाको इकीले जितेकी छन् । उनी ६ स्वर्ण र २ रजत जितेर अगाडि रहिन् । दोस्रोमा रहेका चीनका पौडीवाज जियायु झुले ५ स्वर्ण जितेका छन् । आर्चरी, सुटिङ, पौडी र भारोत्तोलनका केही इभेन्टमा विश्व कीर्तिमान पनि कायम भए भने थुप्रै खेलमा एसियन रेकर्ड तोडिएका छन् ।
इन्डोनेसियाकी १२ वर्षीया स्केटबोर्डर बुन्गा निमास सिन्ता पदक जित्ने कान्छी खेलाडी भएकी छन् । उनले पालेम्बाङमा भएको स्केटबोर्डमा कांस्यपदक जितेकी हुन् । उनले पदक जितेर आमालाई जन्मदिनको उपहार दिएकी छन् । उनकी आमाको अगस्ट २९ मा ३५ औं जन्मदिन परेको थियो । ‘मैले पदक जितेर आमालाई जन्मदिनको उपहार दिएकी छु’, सिन्ताले भनिन् । यस इभेन्टमा १९ वर्षीया फिलिपिनीले स्वर्ण र १७ वर्षीया जापानीले रजत जितेका थिए ।
इन्डोनेसियाको ओलम्पिकतर्फ नजर
इन्डोनेसियाको अब ओलम्पिक आयोजनातर्फ चासो बढेको छ । एसियाड सफलतापूर्वक आयोजना गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस बाचले इन्डोनेसिया २०३२ को ओलम्पिक आयोजनाको दाबेदार भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति जोको विदोदोसँग राष्ट्रपति भवनमा आयोजित भेटघाटमा शनिबार अध्यक्ष बाचले एसियाली खेलकुद सफलतापूर्वक आयोजना गरेकामा प्रशंसा गर्दै इन्डोनेसिया ओलम्पिक आयोजनालाई सक्षम भएको बताएका छन् । भेटमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका अध्यक्ष अहमद अल फाहद अल सबाह पनि उपस्थित थिए । आईओसी तथा ओसिएका पदाधिकारी एसियाड समापनका लागि जकार्ता आइपुगेका छन् ।
महिला फुटबलको एसियाड स्वर्णपदक जापानले जितेको छ । पालेम्बाङमा शनिबार भएको फाइनलमा जापानले चीनलाई १–० ले हराउँदै स्वर्ण जितेको हो । युइका सुगासावाले ८७ औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो । जापानले सन् २०१० को ग्वाङझाउ एसियाडपछि महिला फुटबलमा दोस्रोपल्ट स्वर्ण जितेको हो ।
१८ औं एसियाली खेलकुदमा आइतबार अन्तिम दिन बिहान नेपालले ट्रायथलनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । पालेम्बाङमा जारी खेलमा नेपालले मिक्स्ड टिममा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । १२ औं सागमा रजतपदक जितेको उक्त विधामा रोजा केसी, दीपेश चौधरी, सोनी गुरुङ र वसन्त थारूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
शनिबार व्यक्तिगततर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका दीपेश चौधरीले सफलतापूर्वक दूरी पार गर्न सकेनन् । १.५ किमि पौडी, ४० किमि साइक्लिङ र १० किमि दौड रहेको उक्त इभेन्टमा दीपेश आफ्नै असावधानीका कारण खेलमा अयोग्य भएका थिए । तोकिएको स्थानमा जुत्ता नफुकाली अन्यत्र राखिएकाले उनी अयोग्य भएका हुन् । उनलाई १५ सेकेन्ड पेनाल्टी दिइए पनि उनी प्राविधिक त्रुटिका कारण अयोग्य भए ।
ट्रायथलन संघका अध्यक्ष नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले दीपेशको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता रहेकाले अल्मलिएको हुन सक्ने बताए । दीपेशले पौडी र दौडमा राम्रो गरे पनि बाइकमा खराब प्रदर्शन गरेको श्रेष्ठले जनाएका छन् । यस इभेन्टमा ३३ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दा दुई जना अयोग्य र चारले इभेन्ट पूरा गर्न सकेनन् ।
जुडोतर्फ मिक्स्ड टिमको अन्तिम १४ मा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाली टोली भारतसँग ४–१ ले पराजित भएको छ । नेपालबाट इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, श्रीराम मकाजु, देविका खडका, पुनम श्रेष्ठ, मनिता प्रधान श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यसमा ७० केजीमुनि मनिताले भारतकी गरिमा श्रेष्ठलाई इप्पोनमा पराजित गरेकी थिइन् भने अरू सबैले हारे । जकार्ता एसियाडमा नेपाली जुडोले पाएको यो नै एउटा जित हो । व्यक्तिगततर्फ आठै खेलाडीले एउटै खेल जित्न सकेनन् ।
प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०९:११
आफ्नै कठघरामा उभिएर
स्फटिक रारामा सबलाइम अनुभूति
हृषीकेश शाह - विवादमा रमाउने व्यक्तित्व